दुई नम्बर प्रदेश मात्र मधेश हो त नेताज्यू ? (फरकमत) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » दुई नम्बर प्रदेश मात्र मधेश हो त नेताज्यू ? (फरकमत)
दुई नम्बर प्रदेश मात्र मधेश हो त नेताज्यू ? (फरकमत)
ESAHARATIMES Sunday, January 7, 20180No comments
माननीय राजेन्द्र महतोजी ले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनका लागी कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ । र, स्वभाविक पनि हो उहाँले धनुषाका जनतालाई त्यही आश्वासन दिएर चुनाव जित्नुभएको हो ।
तर यहाँ सबाल उठ्छ कि के मधेश भनेको आठ जिल्ला मात्र हो त ? के मधेसी नेताहरु खास गरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुले मधेसलाई आठ जिल्लामा मात्र सिमित गर्न खोज्नु भएको छ त ?
ती दलले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई उल्टाइ पल्टाइ पल्टाई पढ्नका लागि आग्रह गर्छु । दलका नेताहरुले दिनुभएको चुनावी भाषणलाई एकपटक फरि सुन्न म आग्रह गर्छु, उहाँहरुले मधेश कहाँदेखि कहाँ भन्नुभएको छ । एकपटक होइन पटक पटक उहाँहरुले पूर्व झापादेखि पश्चिम कन्चनपुरको भूभागलाई मधेश भन्नुभएको छ । तर आज आठ जिल्लालाई मात्र मधेशको रुपमा वकालत गरेको देख्दा मलाई मात्र होइन धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ ।
मधेश प्रदेश (आठ जिल्लाको दुई नम्बर प्रदेश) को राजधानीको बारेमा यी नेताहरु बसह चलाई सक्नु भएको छ । ठाउँ पनि खोजि सक्नुभएको छ । तर मधेश आन्दोलनलाई साथ दिएको पश्चिमको थरुहट प्रदेशको राजधानीको बारेमा एकपटक पनि बोल्नु भएको छैन । थरुहट आन्दोलनका कारण देश छाड्न बाध्य हुनुभएका रेशम चौधरी चुनाव जित्नु भएको छ । सो जितलाई आफ्नो भन्ने, आफ्नो पार्टीबाट जितेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो पार्टीमा गिन्ने तर त्यो प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने, त्यो प्रदेशको नाम के हुने, त्यो प्रदेशका जनताको अधिकार कसरी सुरक्षित हुने एकपटक पनि उहाँहरुले चर्चा गर्नुभएको सुन्न पाएको छैन ।
चुनावअघि अलि अलि थरुहट प्रदेश, राजधानी लगायतका विषयमा उहाँहरुले कुरा उठाउको सुन्न पनि पाइएको थियो । तर चुनाव सकिएपछि फोरम र राजपा नेपालका सबै नेताहरु दुई नम्बर प्रदेशमा सिमित हुनुभएको छ । त्यसको राजधानी बनाउनेदेखि नामाकरणको विषयमा बहस चलाइरहनु भएको छ । सरकार गठनदेखि मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री र मन्त्री कोको बन्ने ती दलका नेताहरुले बहस चलाई सक्नु भएको छ । यहाँसम्म कि दुई नम्बर प्रदेशको राजधानीको मुख्यालय कहाँ रहने त्यसको ठाउँको पहिचान गर्ने कार्य पनि उहाँहरुले शुरु गरिसक्नु भएको छ ।
यसबाट झापा, मोरगं, सुनसरी, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, दाङ्ग, रुपन्देही, कैलाली कन्चनपुरका जनताले चित्त दुखेको छ । मधेश कलाउने, मधेश सरकार बनाउने सपना त्यहाँका जनताले देखेका थिए । एकमधेश एकप्रदेशका लागि ती जिल्लाका जनताले पनि रगत बगाएको थियो । मधेश सरकारका लागि त्यहाँका जनताले पनि सहादत दिएको थियो । तर, आज ती दलका नेताहरुले ती सहिदको सपनालाई सपनाकै रुपमा छाडेर आठ जिल्लालाई मात्र मधेशमा सिमित गर्न लागि पर्नुभएको छ ।
स्मरण रहोस् । यी नेताहरुको यही रवैयाका कारणले पश्चिम मधेशका नेताहरु विस्तारै विस्तारै मधेशी राजनीतिबाट अलग हुँदैछन् । अभिषेक प्रताप शाह, ह्रदयश त्रिपाठी, इश्वर दयाल मिश्र, बृषेश गुप्ता, पशुपति दयाल मिश्र, ओमप्रकाश गुल्जारीलगायत थुप्रै नेताहरु मधेशी दल छाडेर अन्य पार्टीमा गइसक्नु भएको छ । यो चुनावपछि अन्य नेताहरु पनि ठूला दलमा जाने तयारी गरिरहनु भएको छ ।
राजपा नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, गोविन्द चौधरीलगायतका नेताहरु किन हार्नुभयो त्यसको बारेमा पनि समिक्षा हुनुपर्छ । फोरम र राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरुको अदुरदर्शिता सोच, सकुँचित विचारका कारण न झापा, सुनसरी, मोरगंका मधेशी नेता त्यस दलमा सुरक्षित देखेका छन् न पश्चिम मधेशका नेताहरु सुरक्षित देखेका छन् ।
नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको थारुहरुको पहिचानको प्रदेश बनाउने हो भन्ने विश्वमा शान्तिको दीप प्रज्वलित गर्ने गौतम बुद्धको जन्मस्थान कपिलवस्तु (लुम्बनी) लाई राजधानी बनाउनुपर्छ । यस विषयमा पनि राजपा नेपालका नेताहरु बोल्नुपर्छ । अर्काे कुरा दलका नेताहरु जे बोलेपनि उहाँहरुले कुन जिल्लाबाट कसको कति मत आएको छ । कुन दलले कहाँ कति जितेको छ त्यसको कदर गर्नुपर्छ । चाहे मुख्य मन्त्री बनाउने कुरा होस् या प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा होस् ।
जनताको मतको कदर गर्नैपर्छ । पर्साको प्रतिनिधिसभा १ बाट फोरम नेपालका प्रदीप यादव, २ बाट विमल श्रीवास्तव, ३ बाट हरिनारायण साह रौनियार , ४ बाट राजपा नेपालका एकजना लक्ष्मणलाल कर्णले मात्र जित्नु भएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को (क) बाट फोरम नेपालका जनत अन्सारी, (ख) बाट लालबाबु राउत, २ का (क) बाट काँग्रेसका राजेश्वरप्रसाद नेपाली, (ख) बाट राजपा नेपालका मेहश प्रसाद कुर्मी, ३ को (क) बाट फोरम नेपालका अब्दुल रहिम अंसारी, प्रहलाद गिरी, ४ को (क) बाट काँग्रेसका शंकरप्रसाद चौधरी, ४ को (ख) बाट फोरम नेपालका सिंगासन साह कलवार रहनु भएको छ ।
पर्साको चारवटा प्रतिनीधिसभामा तीनवटा फोरम नेपाल र एउटा मात्र राजपा नेपालले जितेको छ । प्रदेशसभाको आठ सिटमध्ये फोरम नेपाल पाँच सिट जितेको छ । राजपा नेपालबाट एक र नेपाली काँग्रेस दुई सिट जितेको छ ।
अब बाराको कुरा गरौं । प्रतिनीधिसभा १ बाट काँग्रेसका उमाकान्त चौधरी, २ बाट फोरम नेपालका रामसहाय प्रसाद यादव, ३ बाट रामवावु कुमार यादव, ४ बाट राजपा नेपालका एकवाल मियाँ, अर्थात एक सिट काँग्रेस, दुई सिट फोरम, एक सिट राजपा नेपालले जितेका छन् । बारा र पर्सालाई जोड्दा प्रतिनिधिसभामा मधेशी गठनबन्धनले सात सीट जितेका छन् । बाराको प्रदेशसभामा राजपा नेपालले २, फोरम नेपालले ३, एमालेले २, माओवादी केन्द्रले १ सिट जितेका छन् ।
धनुषा जहाँबाट राजेन्द्र महतो जित्नुभएको छ । जसलाई दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभा १ बाट माओवादी केन्द्रका मातृका प्रसाद यादव, २ बाट फोरम नेपालका उमाशंकर अरगरिया, ३ बाट राजपा नेपालका राजेन्द्र महतो, ४ बाट एमालेका रघुबीर महासेठले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ । राजपा नेपाल र फोरम नेपालले २ सीट मात्र जितेका छन् भने दुई सीट वामगठबन्धनले जितेका छन् भने यस हिसाबले धुनषा कसरी दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी बन्नसक्छ ? धनुषामा २, महोत्तरीमा ३, सीट गरि राजपा र फोरम नेपालले पाँच सीट मात्र जितेको छ ।
प्रदेशसभामा राजपा नेपालले ४, फोरम नेपालले २ गरि ६ सीट रहेका छन् भने दुई सीट वामगठबन्धनले जितेका छन् । जब कि धनुषा र महोत्तरीमा राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका तीनजना सदस्य चुनाव लड्नु भएको थियो । सिरहामा पनि एकजना अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव चुनाव लड्नु भएको थियो । त्यहाँ मधेशवादी दलको अवस्था कस्तो रह्यो कसैबाट लुकेको छैन ।
सिरहा १ बाट काँग्रेसका प्रदीप गिरी, २ बाट माओवादी केन्द्रका सुरेशचन्द्र दास यादव, ३ बाट एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र ४ बाट राजपा नेपालका राजकिशोर यादव जित्नु भएको छ । मधेश आन्दोलनको उर्वरभूमी सिरहामा मधेशवादी दलको हालत किन यस्तो भयो, यो सोचनीय विषय हो । यसको जिम्मेवारी राजपा नेपाल र फोरम नेपालले लिन्छ कि लिँदैन ? यी दुई दल त त्यहाँ गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थिए तर किन असफल भयो ? यसको पनि समिक्षा हुनु आवश्यक छ ।
क्षेत्र नम्बर एकका राजलाल यादवले भन्नुहुन्छ, मलाई मेरै पार्टीले षड्यन्त्र गरेर चुनाव हरायो । पार्टीबाट नै प्रदीप गिरीलाई समर्थन गरेको हल्ला चलायो । त्यही भएर म हारे ।’ दुई नम्बर प्रदेशका सत्रुधन सिंह कोइरी जो फोरम नेपालबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । उहाँले राजपा नेपाल र आफ्नै पार्टीका नेताहरुले धोका दिएको आरोप लगाउनुभएको छ । तीनको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । फोरम नेपालका अश्वेश्वर यादव जित्ने सम्भावना निकै थियो । सिरहा नगरपालिकादेखि अन्य स्थानीय तह पनि जितेका फोरम नेपाल त्यहाँ हार्नुका खोजी हुनु आवश्यक छ ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनको उदगमस्थल सप्तरी जहाँबाट फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनाव लड्नु भएको थियो । त्यहाँको कुरा गर्दा सप्तरी १ बाट फोरम नेपालका डा. सूर्यनारायण यादव, २ बाट फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव, ३ बाट राजपा नेपालका चन्द्रकान्त चौधरी, ४ बाट काँग्रेसका तेजुलाल चौधरी चुनाव जित्नुभएको छ । जब कि चारवटै क्षेत्रमा मधेशी गठबन्धन जित्नुपर्ने हो ।
पर्सा र बारामा हेवीवेट नेता कोही पनि हुनुहुन्थेन । फोरम र राजपा नेपालका ठूला नेता र साधन स्रोत सबै सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीसम्म मात्र सिमित थियो । राजपा नेपाल र फोरम नेपालले आलोपालो सप्तरी र धुनषामा विशाल जनसभा पनि गर्यो तर त्यही छेउमा रहेको बारा र पर्सातिर फर्केर पनि हेरेन । सप्तरी जान सक्नु भएका राजेन्द्र महतो आफ्नो गृह जिल्ला सर्लाहीसम्म जान सक्नुभएन ।
तर यी ठूला नेताहरुको मेहनत हेर्दा सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीको परिणामलाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । बरु पर्सा र बारालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ र त्यहाँका जनतालाई धन्यावाद दिनुपर्छ । अनि के आधारमा माननीय राजेन्द्र महतो जीले बारा र पर्साको तुलनामा धनुषा (जनकपुर) लाई राजधानी बनाउने वकालत गरिरहनु भएको छ ? त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
जनादेशले त जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनि भनेको छैन त । झापादेखी कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई पनि मधेश बनाऔं, त्यहाँका जनतालाई पनि अपनाऔं । दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर पनि हुनुपर्छ तर अरु ठाउँ त्यसको विकल्प हुनसक्दैन पनि होइन । राजधानीको विकल्प अरु ठाउँ पनि हेरौ ।
(बीपी यादव राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)